မကွေး တိုင်းဒေသကြီးရှိ အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ်နှင့် တိုက်နယ် ဆရာဝန်မျ?? - Yangon Media Group
မကွေး၊ နိုဝင်ဘာ ၅
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ်နှင့် တိုက်နယ်ဆရာ ဝန်များထံသို့ Mobile Tablet များ ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မ ကွေးမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနမှ Mobile Tablet များ ဖြန့်ဝေပေးရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုက်နယ်ဆရာဝန်များ နှင့် မြို့နယ်ဆရာဝန်များအတွက် အလုံး ၈ဝ၊ ဆေးရုံများနှင့် ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ၂၆၆၅ လုံး ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။အဆိုပါ Mobile Tablet များကို သုံးစွဲရလွယ်ကူစေရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီး ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက်သဖွယ် အသုံးပြုနိုင်မည့်အပြင် အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းအား ဖြန့်ဝေပေးမည့် Mobile Tablet များတွင်စာအုပ် စာတမ်းပေါင်း ၁၂ဝ ကျော်ပါဝင် ပြီး မြို့နယ်နှင့် တိုက်နယ်ဆရာဝန် များအား ဖြန့်ဝေမည့် Mobile Tablet များတွင် စာအုပ်စာတမ်း ပေါင်း ၄ဝဝ ကျော်ပါဝင်သည်။
ဆက်လက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့် ထွေးမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန် ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာခင်မောင်အေးထံ Mobile Tablet များအား ပေးအပ်ပြီး တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန် ရှိသူများက တိုက်နယ်ဆရာဝန်၊ မြို့နယ်ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံနှင့် ကျန်း မာရေးဝန်ထမ်းများထံ Mobile Tablet များ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေး ခဲ့သည်။ Mobile Tablet များကို ပ ထမအကြိမ်အဖြစ် ကယားပြည်နယ်၌ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ယခုမကွေးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ပေးအပ်ခြင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိုးရာသီကာလ ချင်းတောင်ပေါ်၌ သွားလာခွင့် ပိတ်ထားသော ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ မကြာမီ ပြန်လည် သွား??
ဘရာဇီးနိုင်ငံ အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ပို့ကုန်များအား တိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ကုန်သွ?
၆၃ နှစ်ကြာ သင်ကြားခဲ့သော အလယ်တန်းကျောင်းခွဲကို အခြားရွာသို့ မပြောင်းရွှေ့ရေး ကျောင်းသားမိဘ